Ngabe iSouth Park Ineqhaza Ekukhuphukeni Kwesokudla? Lo mbhali ucabanga kanjalo - Isiko Lopop
ISouth Park Yenze I-Rise of White Supremacists-Heres How
ISouth Park ungomunye wemibukiso ethathe isikhathi eside kuthelevishini, i-behemoth yamasiko ewina imiklomelo engama-20 ethola imiklomelo esungule amabhayisikobho, ukulingiswa, kanye nama-memes amaningi achitha isikhathi .
Kepha ngabe lo mbukiso kungenzeka, okungenani ngokwengxenye, ubhekane nenye yezinhlangano ezesabekayo zepolitiki zomzuzu wamanje? ULindsey Weedston ucabanga kanjalo.
UWeedston, umbhali oneminyaka engu-29 waseBothell, eWashington, ubhale udaba lweThe Establishment muva nje oluthi umbukiso usize ekuholeni kwe-alt-right. Ucezu, ' 'ISouth Park' Isize Kanjani Ukunika Amandla i-Alt-Right . Ingxoxo yethu, ehlelwe kancane ngobude nokucaca, ingezansi.
Ukuqala, kanjani ISouth Park ukuphatha lokho abanye abantu abangakucabanga njenge 'PC culture'?
Ngifundile okuthunyelwe lokho kuchaze lokhu kahle impela — Inhloso ephakeme kakhulu yeSouth Parks ukunganaki. Iphatha isiko le-PC sengathi [uma] okuphambene nesiko le-PC akuyona ukunakekela noma yini.
Ngakho-ke ukunakekela udaba empeleni kuyisiphukuphuku, futhi cishe sonke isiqephu sibuyela emuva: akunandaba, ukuba yi-PC akuhlanzekile, futhi ukunganiki lutho nganoma iyiphi indlela okufanele uzizwe ngayo.
ungayenza kanjani i-rose fondant yegolide
Esihlokweni sakho ulandelela umlando waleso simo sengqondo, uqale ngokuchazwa ngokungeyikho komlingiswa we-movie ye-Oliver Stone. Ungangidlulisa kulokho?
Lokho kwakuthakazelisa. Ngakho [ibhayisikobho yango-1987] Wall Street , Bengingazi ngaphambi kokuthi ngicwaninge lesi sihloko ukuthi u-Oliver Stone empeleni wayeqonde ukuthi kuphambene nokuthi bangaki abantu abasithathile. Wall Street kwakufanele kube yicala leWall Street nohlobo lomuntu ocabanga ukuthi ukuhaha kuhle.
Kwakuthakazelisa kakhulu ukuthola ukuthi abantu abaningi bahamba nemanaa 'ukuhaha kuhle,' futhi kubukeka sengathi lokho kuye kwakha isiko lethu eliningi. Manje sesinakho ukuchuma kobuKristu - empeleni sitshele abantu ukuthi uNkulunkulu ufuna baqoqe ingcebo eningi ngangokunokwenzeka.
Akunjalo nje Wall Street. Isikhathi eside, umphakathi wethu wongxiwankulu uholele kulo mqondo wokuthi inhloso enkulu ukuqoqa ingcebo eningi ngangokunokwenzeka. Leyo movie yasheshisa umqondo wokuqoqa yonke ingcebo namandla ongakwenza.
Futhi-ke ukhuluma ngama-jock othusayo ama-80s nama-90s, amaHoward Sterns omhlaba. Ngabe lokho kuhlangana ngani nesimo esithandwa kakhulu yiSouth Park sokukhathalela ukungabi lupholile?
Isihloko sokuqala salesi sihloko engisiphosile empeleni bekungu-'Umlando Wama-Assholes Agujwayo. ' Okusalungiswa kwami ​​kokuqala kocezu, ngigcine ngicwaninga ngezindlela zokuqala zokushaqeka nezamahlaya ezimpundu. Ngithole ukuthi umuntu obhekwa njenge-shock jock yokuqala empeleni bekungumuntu omnyama, UPetey Greene . UWoward Stern uthonywe nguye.
Kuyathakazelisa ngempela ukufunda uhlobo lwezinto akhuluma ngazo. Wayenxusa ngoba wayephansi kakhulu eMhlabeni, futhi wakhuluma nomphakathi omnyama ngendlela eqonde kakhulu eyayingakaze ibe khona i-disk disk jockey emhlophe eyake yaba khona ngaphambili. Ngenkathi kubulawa uDkt Martin Luther King, Jr., waya emoyeni waqala ukukhuluma nomphakathi, futhi ubongwa ngokuthoba isimo phansi .
Ungaya ku-YouTube uthole eminye imibukiso ulalele indlela akhuluma ngayo. Ihlangene kakhulu. Uvele aziphathe njengomuntu ojwayelekile. Ngicabanga ukuthi abantu abamhlophe ngaleso sikhathi babekubheka njengokwethusa lokho, futhi yingakho kwathiwa ubizwa nge-shock jock.
Wayekhuthele ngempela emphakathini. Wakhuthaza imfundo futhi wondla abalambile. Wayengeyona imbongolo, kepha umlando uthakazelisa kakhulu. Embhalweni wami wokuqala, ngabhala ukuthi wamthonya kanjani uWoward Stern. UWoward Stern empeleni umenyiwe embukisweni wakhe. UStern uqhubeke ngobuso obumnyama wasebenzisa igama elithi n , futhi uGreene wayecabanga ukuthi kuyahlekisa.
UGreene ushone esemncane impela, ngakho-ke udlulela emsebenzini kaHoward Sterns. U-Howard Stern, ngiqinisekile, wenze izinto ezinhle empilweni yakhe. Kepha uhlotshaniswa kakhulu nelebuli ye-shock jock, futhi okuningi akwenzayo nje ukuxolela abantu. Ngicabanga ukuthi kuyathakazelisa ukuthi unalolo shintsho oluvela kothile obevele engokoqobo futhi exhumana nabantu bakhe ngendlela enengqondo kuye; bese uba noHoward Stern, owenza imali eningi — futhi empeleni ngumsebenzi wonke — ngokuqhatha abantu.
Ngabe ufika kanjani ku-alt-kwesokudla kusuka lapho? Kwenzeka kanjani ISouth Park Isimo sengqondo jikelele sixhuma ku-alt-kwesokudla?
Ngikholwa ukuthi imilayezo yokulwa ne-PC yaseSouth Park ivule indlela yokuthi amaqembu abamhlophe aqokelwe ukwenqaba ukuthola abantu besilisa abaningi abamhlophefanbasekulokho manje okubizwa ngokuthi i-alt-right, noma amanye amaqembu afana ncamashi kuwo wonke amagama. UMatt noTrey bakhuthaze lo mbono wokuthi kufanele ukwazi ukusho noma uphilise noma yini oyifunayo egameni lokuhlambalaza nokuhlekisa, futhi noma yikuphi ukulimala okubange khona bekungekho noma akunandaba.
Ngenkathi bezwa ukushaqeka ngenxa yokuqina kwabo ukuhlekwa usulu kwamaqembu asevele esengozini kanye nesimo sabo sengqondo sokuthi, 'Ukuphindaphinda izinto ezinyantisayo ezishiwo ngama-bigots kuze kube nokubandakanya amaNazi kuyahlekisa ngoba kuyabacasula abantu,' basabela ngokuveza abagxeki babo njengenkulumo ekhululekile-ecindezelayo ama-caricature afana ' PC mfowethu . ' Bathuthukisa umbono wokuthi abantu abakhishwa inyumbazana — abantu abadlulayo, abantu bebala, abantu abangamaJuda, njll. —Bakhuluma ngokumelene nokulimala okubangelwa ISouth Park Uhlobo 'lwamahlaya' futhi [umbukiso] 'Ngenza engikufunayo' abacindezeli bangempela.
Amaqembu ama-supremacist abamhlophe kanye nozakwabo abangcono be-PR 'alt-kwesokudla' basebenzisa lo mlayezo njalo ukuthola amadoda nabafana abasha abamhlophe. Batshela lezi zingane ukuthi bakhona labo abacindezelwe yilabo ababatshela ukuthi banelungelo, ngakho-ke badinga ukwenza umzamo wokungenani bangawasebenzisi amagama athile futhi mhlawumbe bahlole isimo sengqondo sokubandlulula okungenzeka ukuthi basithatha esikweni elinobandlululo ngezindlela eziningi. I-alt-right ikhuthaza umqondo wokuhlukunyezwa kwabesilisa abamhlophe, ukudweba ebusheni okutshelwe ngu ISouth Park ukuthi usizi lwamaqembu acwaswa alunandaba nokuthi 'ukunemba kwezepolitiki' kuyabacindezela. Lapho lawo maqembu ethembekile, angabe esefundisa lezi zinsizwa emibonweni eqondile yabamhlophe ngaphansi kwesiqubulo sokuthi 'amaphoyisa e-PC awafuni ukuthi ucabange ngalokhu.'
Angicabangi ukuthi uMat noTrey bebeqonde ukudala ibutho le-alt-kwesokudla, kepha babukeka bethembele kulo kunokuba bavume ukuthi kungenzeka baphazamisekile.
Umbhali uLindsey Weedston
UCartman ubamba iqhaza elikhulu ku-athikili yakho. Ngokuvamile akalona iqhawe ezindabeni zezindaba zeziqephu ngazinye, kepha uyintandokazi yabalandeli. Ungakwazi yini ukudiliza ukuthi kungani lokho kuyinkinga?
UCartman ukubonakaliswa okuphelele kokuhlambalaza akuhambanga kahle. Njengo- Wall Street , abantu ababuka okuqukethwe kwakho bathatha incazelo engokoqobo yento esikhundleni sokuyithatha njengecala lokuthi liyikho. Kucace bha, ikakhulukazi kwiziqephu zangaphambili, ukuthi akufanele uthande uCartman. Awufanelanga ukuhlonza naye. Kufanele umzonde, noma okungenani uqonde ukuthi uphikisana nombono womuntu. Lokho kufanele kumelwe ekuzameni kwakhe okukhulu, ukungazi kwakhe, kanye nokubukeka kwakhe, naye ekhuluphele.
Futhi-ke uyintandokazi yabalandeli, nabantu yenza hlaziya naye. Ngicabanga ukuthi kwakunguMat Stone owathi uhlangana noCartman ngaphezu kwanoma yimuphi omunye wabalingiswa. Ngicabanga ukuthi inhloso yabo yasekuqaleni kwakungukuthi, kulungile, ungafani noCartman. Kepha esikhundleni salokho, unokusabela okuphambene kwabantu abagxilisa isimo sakhe sengqondo nobugovu bakhe nesifiso sakhe sokwenza abantu bahlupheke nobandlululo lwakhe. Usephenduke isethulo sokuthi abalandeli bazizwa kanjani kufanele ube yiso.
Ungakhuluma nge ' ISouth Park AmaRephabliki '- ISouth Park ukwamukelwa ngu amaphiko angakwesokudla ?
Lokho kudlala kulokho engicabanga ukuthi kuyisiphetho esinengqondo sokuhamba kwe-anti-PC. Njengoba ngishilo ku-athikili, kube nokuhlubuka kulo mbono wokuba yi-PC.
Ukulungiswa kwezepolitiki kuguquke kwaba yigama elichazayo elisho ukuthi uzwela kothile. Sekuyilo mlisa omkhulu. Kunombono wokuthi kunaleli qhawe lezobulungiswa kwezenhlalo, inhlangano yamaphoyisa e-PC ezofika ikuthethise futhi ikujezise uma usho lokho okucabangayo empeleni. Ngakho-ke kube nokuhlubuka kulo mkhuba. Sehlile, uma ukhathalela noma ngubani, uma ufuna ukuzwela kunoma iziphi izidingo ze-anyones, khona-ke ubhekene nale neriya efanelekile yezepolitiki noma uyi-ndela enombusi noma umuntu onegunya utshela abantu ukuthi benzeni. Ngakho-ke awupholile futhi uyisitha.
Ukuphendula kwayo impela. Kepha idume kakhulu futhi isabalele okwamanje, futhi empeleni unabantu abaphuma nezindatshana nabantu baseWhite House basebenzisa leyo nkulumo ukusiza ukuqhubekisela phambili imisebenzi yabo yezepolitiki.
Kufanele siyeke ukulunga kwezepolitiki bese singena ebhizinisini lokuphepha labantu bethu. Uma singahlakaniphi kuzoba kubi kakhulu
- UDonald J. Trump (@realDonaldTrump) Juni 4, 2017
Ngakho-ke akumangazi neze kimi ukuthi kukhona izindatshana laphaya ezithi ISouth Park kulungile ezindabeni zepolitiki zangempela.
Yini elandele ukuvuka kweSouth Parks?
Isibonelo sokuqala esiza engqondweni kuningi ukwelashwa kwamasiko kwabantu abadlulayo. ISouth Park ube nokuqukethwe okusobala kakhulu. Ngisho nangaphambi kwalokho isiqephu sikaCainlyn Jenner , kwakukhona konke ukwelashwa kukaMnu. Garrison nokushintsha kwakhe kobulili. Ngikhumbula isiqephu lapho befaka khona imidwebo yokuhlinzwa kwangempela yokuqinisekiswa kobulili, ngithi nje, 'bheka ukuthi kubi kangakanani lokhu.' Babenamagama-ncazo afana nokuthi, 'Le yimidwebo yokuhlinzwa kwangempela,' njengokungathi kufanele ukuthi iyesabeka futhi iyadabukisa ngoba ikhulu kakhulu. Kepha noma yini ukuhlinzwa kubukeka kukubi futhi kuyenyanyisa. Inhloso yabo ecacile bekuwukufana, lokhu kubi kakhulu futhi lokhu akulungile.
iresiphi emhlophe yekhekhe le-velvet kusuka ekuqaleni
Ubona inani elikhulu le-transphobia evela emaqenjini amaningi angakwesokudla. Unezikweletu zokugezela ezizama ukugcina abantu abadlulayo bengekho ezindlini zangasese zomphakathi, okubagcina ngaphandle kwempilo yomphakathi. Izama ukuwagcina ekutholeni ukufinyelela kunoma yiluphi uhlobo lwempilo ejwayelekile.
Ukuvela okungazelelwe kwemali ekhokhwayo yokugezela kwangimangaza, kepha mhlawumbe bekungafanele kube khona. Kubonakale kungazelelwe, kepha bese ubheka isikhathi futhi kulandela ukulandela uCainlyn Jenners ophumela emphakathini njengomuntu wesifazane. Lokho kukodwa mhlawumbe bekungathola ukubuyela emuva, kepha bese ubheka ukuthi kudume kanjani ISouth Park is, and theres no way it did not play a role in people reaction ngendlela abenze ngayo: reactioning like, oh thats just so gross — their existence is gross and wrong.
Uqeda indatshana yakho ngocingo lwalokho okubiza ngomusa omkhulu. Kusho ukuthini lokho?
Umusa ogqamile uqhamuka ngokuba seduze kwabantu abasha, ikakhulukazi emiphakathini ebheke ubulungiswa kwezenhlalo. Emphakathini wangakithi, ngibona ushintsho olubhekiswe kuma-meme luhle futhi lujwayele ukuphakamisa abantu. Ngicabanga ukuthi abantu bakhathele nje ukushayana bodwa nokuhlaselwa, futhi izizukulwane ezisencane ikakhulukazi seziqala ukuvukela lokho.
Ngizizwa ngathi kuningi lokho isizukulwane sami, izinkulungwane zeminyaka, esikubeke lapho kube kubi. Bebenomusa wesizukulwane esidangele, ngakho-ke ngicabanga ukuthi abantu abasha basabela kulokho futhi bathatha isinqumo, mababe mnandi komunye nomunye. Emphakathini lapho ukuphathwa kabi komunye nomunye kuyinto evamile, umusa yi-punk. Lokho kuvukela. Lokho kuhle.
owayengumdlali webhola basketball ongcono kunabo bonke
ungayenza kanjani ikhekhe lebhokisi super moist
ungamqinisekisa kanjani umkakho ukuthi abe nendlela eyi-3
yiliphi izinga lokushisa olincibilikisa ushokoledi